Warsaxaafadeed Tiiraanyo leh oo Goordhow kasoo baxay Xafiiska Ra’isul Wasaare Xasan Kheyre
Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo ku hadlaya magaciisa iyo magaca Golaha Xukuumada ayaa ka tacsiyadeeyey geerida Nuur Faarax Xersi oo
Naxdin Daawo:-Tacadigii Ugu Xumaa Uguna Murugada Badnaa Oo Loo Geesto Gabar Soomaaliyeed Oo Da`yar..
Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacday mid kamid ah tacadiyadii ugu xumeyd uguna murugada badneyd ee loo gaystay gabar da’yar. Ciidamada Amisom ayaa xabsi ku xareystay
MUUQAAL: 10 Atariisho oo caan ka ah India oo wajigooda qaliin ku sameeyay si ay hormar ugaaraan
10 Kamid ah gabdhaha ugu caansan ee shirkada Bollywood-ka ayaa isbadal ku sameeyay wajigooda si ay uhelaan qurux aysan ku dhalan. Atariishooyinkaas waxaa kamid ah Printa Zinta, Katrina Kaif iyo Kareena ...
Daawo:- Maxay Diinta Ka Qabtaa Xuska Maalinta Jaceylka (Valentines Day)
Barnaamijka oo ah mid aad u xiiso badan ayaa waxaa looga hadlayaa waxa ay diinta islaamka ka qabto xuska maalinta jaceylka oo ay dad badan u yaqaanaan Valentines day. Maalin taan ...
Daawo:-Shacabka Gaalkacyo oo furay wadooyinkii mudada xirnaa ee Guuleed iyo Gaas furi waayeen.
Shacabka magaalada galkacyo ee ka soo kala jeeda maamulada galmudug iyo puntland ayaa maanta isku baheystay furitaanka wadooyin mudo dheer xirnaa oo lagu gooyey ciid iyo dhagaxaan. Wadooyinkaan ayaa waxaa furi ...
DAAWO:- Qaarad cusub Oo Dunida ku soo Kordhaysa
Qisada Qaaradda cusub ee Dunida ku soo Kordhaysa.
Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmaya cadaadis xoogan oo uga imaanaya shacabka aan taageersaneyn ee dalkiisa. Haatan arrintu waxay mareysaa in lala tartansiiyo JAB BASAL ah. Weliba JABKAAS ...
Boosteejada Tareenka Kayashima Station ee ku taalla magaalada Neyagawa oo dhacda Waqooyi Bari caasimadda Osaka ee dalka Japan, waa mid ka mid ah boosteejooyinka tareenka ee leh muuqaalka ugu yaabka ...
DAAWO:-Hooyo 7 caruur ah haysata Oo Kashaqaysa Gadiidka Dad Waynaha”Cajiib
Faaisa Cabdi Ereg oo ah hooyo Soomaaliyeed oo leh 7 caruur ah ayaa ka mid ah taksiilayaasha shirkadda Uber ee magaalada London. Riix Halkan Si aad Udawato Weriyaha VOA ee London ...
Gabadh yar oo Suuriyaan ah oo warqad ah u dirtay Trump Maxaa ku qornaa?
Bana Alabed oo ah gabadh todobo jir ah oo reer Xalab ah oo caan ka noqotay Adduunka iyadoo Tweeter-ka qoraalo soo dhigi jirtay ayaa waraaq furan u dirtay madaxwaynaha Maraykanka ...